Heshiis Dhexmaray Xisbyada Vänsterpartiet iyo Socialdemokraterna oo la shaaciyay
HomeWararka Maanta SomaliskaHeshiis Dhexmaray Xisbyada Vänsterpartiet iyo Socialdemokraterna oo la shaaciyay
November 24, 2021 Wararka Maanta Somaliska 0
Ilo wareedyad muhiim ah ayaa sheegaya in xisbiyada Vänsterpartiet iyo Socialdemokraterna ay gaareen heshiis dhex-dhexaad ah oo lagu meel mariyo dowlad cusub oo Iswiidhan ah oo ay madax ka tahay Magdalena Andersson.
Sagaalkii habeenimo ee caawa, golaha xisbiga Bidixdu waxa uu qaatay mawqif wanaagsan, iyaga oo ansixiyay heshiiska.
Ilo wareedyada ayaa sheegaya in wadahadallo xooggan oo dhex maray xisbiyada Sooshal dimuqraadiga iyo Vänsterpartiet ay ka soo baxeen natiijooyin.
Waxaa la sheegay in hogaamiyaha xisbiga Bidixda Noshi Dadgostar uu ka baxay shir socday fiidkii.
Sida laga soo xigtay Aftonbladet, xisbiga Vänsterpartiet ma helin ogolaansho dalabkooda ah kordhinta lacagta hawlgabka, laakiin taa beddelkeeda waxay ogolaadeen in lagu daro waxyaabo gaar ah oo loogu talagalay dadka hawlgabka ugu liita . Swedish bishii.
09.00 subaxnimo Arbacada Bari, baarlamaanka Iswiidhan wuxuu yeelanayaa kalfadhi si ay ugu codeeyaan Magdalena Andersson inay noqoto madaxa dawladda.
Xisbiga Vänsterpartiet ayaa ku adkeystay dalabka ah in la kordhiyo mushaaraadka howlgabka, taasoo ah caqabada ugu weyn ee soo wajahday wadahadaladii labada dhinac maalmihii lasoo dhaafay.
Hadii ay ku guulaysato codka, Andersson ayaa noqonaysa haweenaydii ugu horaysay ee jagadan ka qabata Sweden.